Tim Cook wuxuu xaqiijinayaa in Apple Card uu gaari doono dalal badan | Wararka IPhone
Tim Cook wuxuu xaqiijinayaa in Apple Card uu gaari doono dalal badan
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee Apple soo bandhigtay bishii Maarso ee la soo dhaafay, isla dhacdadii lagu sii daayay Apple Arcade, Apple News + iyo Apple TV + ayaa ahayd Apple Card, oo ah kaarka amaahda wuxuu si buuxda u galayaa qaybta bangiyada Goldman Sachs.
Intii lagu gudajiray dabaaldeggii Fest Oktoobar ee Jarmalka, Tim Cook wuxuu u safray waddanka oo uu la hadlay warbaahinta, wuu xaqiijiyay arrintaas Apple waxay ka shaqeyneysaa soo saarista caalamiga ah ee Apple CardJarmalka oo bartilmaameed u ah mustaqbalka soo saarista kaarka Apple, in kasta oo aanan shaacin goorta la heli karo.
Sida laga soo xigtay Tim Cook wareysi uu siiyay warbaahinta Jarmalka ee Bild, "Waxaan dooneynaa inaan kaararka siinno meel walba", marka lagu daro sheegistaas qorshuhu waa kaarka Apple inuu adduunka oo dhan ka joogo, sida iPhone-ka oo kale. Si kastaba ha noqotee, wuxuu ka digayaa inay jiraan dhibaatooyin badan oo ku saabsan bilaabida kaarka deynta, maaddaama waddan kasta uu leeyahay sharciyo iyo xeerar kala duwan oo la xiriira qaybta bangiyada. Si sax ah Jarmalka ayaa ka mid ahaa waddamada ay kharashka ugu badan ku bixiyeen soo saarista adeegga lacag bixinta iyada oo loo marayo iPhone, iPad iyo Apple Watch oo loo yaqaan Apple Pay.
Kaarka Apple wuxuu siiyaa tiro badan oo faa'iidooyin ah dhammaan dadkaas oo si joogto ah u socdaala tan iyo markaas wax lacag ah kama qaado wax komishan ah macaamil ganacsi oo laga fuliyo dibada. Si loo helo kaarkan, waa inaad dhaaftaa kontaroolada Goldman Sachs, oo runtii ka dambeeya kaarka.
Si loogu soo bandhigo kaarka Apple dalal kale, Apple waa inay gaaraan heshiisyada hay'adaha maaliyadeed ee waddan kasta, oo la mid ah midka ay hadda la leedahay Goldman Sachs, heshiis kaas oo, sida uu xaqiijiyay Tim Cook laftiisu, aan sahlaneyn maaddaama ay ku xiran tahay arrimo kala duwan oo aan ku xirneyn oo keliya ujeeddada Apple ee ah in ay soo saarto sheygan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Tim Cook wuxuu xaqiijinayaa in Apple Card uu gaari doono dalal badan
Barnaamijka Halide sawir ayaa lagu cusbooneysiiyay taageerada kaamirooyinka cusub ee iPhone 11 Pro
Apple News + waxay bilaabaysaa balaarinteeda caalamiga ah waxaana hada laga heli karaa UK iyo Australia